Ngomhla we-15 kuMeyi, I-Realme ibhengeza ii-smartphones zayo zokuqala e-China. Inkampani kutshanje iqinisekisile ukuba i-Realme X smartphone iya kuqala apho.
Kutshanje, nge Iposti yeWeibo, U-Realme uqinisekisile, okokuqala, ezinye zeempawu ze-Realme X ye-smartphone, kwaye sichaza iinkcukacha ngezantsi. Sikwabonisa uninzi lokucoca ulwelo ngaphambili.
U-Realme utyhile ukuba iRealme X iza kufika nge Uyilo olupheleleyo-lwesikrini oluya kukuvumela ukuba ubonelele nge-91.2% yomlinganiso wesikrini ukuya emzimbeni. Iphaneli eya kuyilungiselela iya kuba yitekhnoloji ye-AMOLED. Ukongeza, ithi ikhamera yokuphakamisa eya kuba nayo iselfowuni inomjikelo wobomi we-200,000 yeewindows ezivelelayo. Kubonakala ngathi inkampani iya kuqhubeka nokusasaza ulwazi malunga neempawu ezahlukeneyo zeReal X ngaphambi komsitho wokuphehlelelwa.
I-Realme X enekhamera ezivelelayo kwifoto
Imifanekiso yeRealme X sele ivele kuluhlu lwazo lwe-TENAA. Nangona kunjalo, udweliso lunemilinganiselo emincinci yefowuni kwaye iyakuqinisekisa oko Iya kufika ngescreen se-intshi ye-6.5 kunye nomthamo weebhetri we-3,680 mAh.
Amarhe ajikeleze ifowuni ayityhile loo nto ziya kunikwa amandla liqonga leselula Snapdragon 730. Ibhetri ye-smartphone inokutshatiswa kunye netekhnoloji yokutshaja kwe-VOOC 3.0. Indawo yangasemva efanayo inokubonisa ukuseta ikhamera ezimbini ezibandakanya i-sensor ye-MP eyi-48 ye-MP kunye ne-5 megapixel yesibini sensor. Useto lwekhamera ye-selfie ye-pop-up ayaziwa. Kwakhona, ifowuni kulindeleke ukuba ifike njengemodeli yokuqala yeReal kunye nomfundi obonisa iminwe.
Okunye ukuvuza kuphakamisa ukuba iRealme X iza kuphehlelela kwiimodeli ezintathu zeememori ezahlukeneyo: 6GB ye-RAM + 64GB yokugcina, 6GB ye-RAM + 128GB yokugcina, kunye ne-8GB ye-RAM + 128GB yokugcina. Ezi modeli ziya kuza nezi zinto zilandelayo kunye nexabiso lethegi: 1,599 yuan (~ 210 euros), 1,799 yuan (~ 237 euros) kunye 1,999 yuan (~ 263 euros).
Ulwazi lwamaxabiso kunye nezinto ezahlukeneyo zoHlelo loLutsha lweReal X zisephantsi kokusongwa. Kodwa le kuthiwa isungula nge-6.3-intshi ye-IPS LCD yesikrini samanzi, iSpapdragon 710 iqonga leselula, ukuya kuthi ga kwi-6GB ye-RAM, i-128GB yokugcina ngaphakathi, ibhetri ye-4,045mAh ene-VOOC yokutshaja inkxaso. 3.0, 16 MP + 5 MP ikhamera emibini ngasemva kunye ne-25 megapixel selfie snapper.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Realme iqinisekisa ukuba i-Realme X iza kufika nekhamera ephumayo kunye ne-bezels eziphezulu
Izicelo ze-Android zokunceda okusingqongileyo